Wararka Maanta: Axad, Jun 20, 2021-Gabar 14 jir ah oo kufsi wadareed loogu geystay deegaanka Ceelasha Biyaha
Gabadha hooyadeed oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in gabadheeda aay u dirsatay suuqa kadibna dib usoo laaban weysay markii aay talefankeedii wacdayna uu dansana meel walba oo aay ka raadisayna aay waysay gabadheeda.
"Laba maalin iyo laba habeen ayaan weysana gabadheyda oo suuqa adeeg uga dirsaday kadibna la afduubtay, waxaana markii dambe ka helnay meel banaan ah oo lasoo dhigay iyadoo miir daboolan, dhaawacyo badan ayaa jirkeeda ka muuqdo guriga ayaan isaga haysta" ayay tiri hooyada dhashay gabarta yar.
Dhacdadaan ayaa dhacday 17-kii bishan waxaana la sheegay in gabarta ay kufsadeen rag gaaraya 20 oo mudo laba cisho ah haystay gabadha sida aay warbaahinta u xaqiijiyeen ehelka gabadha.
Adeerka gabadha la kufsaday oo lagu magacaabo Jabriil Sheekh Maxamed ayaa sheegay in gabadha ragii kufsaday qaarkood lasoo qabtay oo aay ku xiran yihiin xarunta CID-da ilaa 8 ruux islamarkaana tobaneeyo kale aay baxsadeen kuwaas laguna raad joogo soo qabashadooda.
"Gabadha yar ragga kufsaday wax walbo oo xumaan ah oo diinta, dadnimada, iyo Soomaalinimadaba aysan ogoleen ayay ku sameyeen waxaana dalbaneyna inaan helno Cadaalad" ayuu yiri Jabriil Maxamed Sheekh oo ah gabadha adeerkeed.
Dhacdan ayaa ah mid aad u argagax galisay dadka ku dhaqan deegaanka Ceelsha Biyaha, inkasto aysan aheyn dhacdadii ugu horeysay waase mid kuso kordheysay gudaha Soomaaliya sanadahan dambe.
6/20/2021 8:27 AM EST